राजनीतिक परिवर्तन भएपनि जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन आएको छैन– भुप नारायण घर्तीमगर, परिवर्तनका लागि साझा प्रयास समूह संयोजक – रोल्पा समाचार
२०७८ भाद्र ६, आईतवार ०७:०८ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७८ भाद्र ६, आईतवार ०७:०८ गते
भुप नारायण घर्तीमगर,
परिवर्तनका लागि साझा प्रयास समूह संयोजक ।
रोल्पाको सुनिलस्मृति गाउँपालिका ४ नं. वडा सुलिचौरका समाज सेवीहरुको सक्रियतामा नितान्त गैर–राजनैतिक एवम् गैर–नाफामूलक सामाजिक संस्थाको रुपमा स्थापना भएको परिवर्तनका लागि साझा प्रयास समूहले परिवर्तन आफैबाट शुरू गर्नु पर्छ र परिवर्तनको यात्रा आफ्नै आँगनीबाट शुरू हुन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै समाज र जनताको सेवामा समर्पित हुँदै समाजिक कार्यमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । समूहका संयोजक भुपनारायण घर्तीमगरसँग समूह गठन गर्नुको उद्वेश्य, हालसम्म गरेको अभियान, आगामी योजना लगायतका विषयवस्तुमा रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाको उप सम्पादक रेशम बि.क.ले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
पत्रिकामा स्वागत छ ।
 धन्यवाद ।
 आजभोली कुन कार्यमा व्यवस्त हुनुहुन्छ ?
 म अचेल परिवर्तनका लागि साझा प्रयास समूह मार्फत साथीहरुसँग मिलेर सामाजिक कार्यमा लागि रहेको छु ।
समूह गनठनका लागि कसरी उत्प्रेरित हुनुभयो ?
 मेरो मित्र बालकृष्ण सुवेदी जीले प्रस्ताव गर्नु भयो । सबै साथीहरुको सर–सल्लाह ग¥यौं अनि समूह गठन भयो ।
 समूहको उद्वेश्यहरु के–के हुन् ?
 हाम्रो उद्वेश्य समाजमा सकारात्मक र श्रृजनशिल परिवर्तन ल्याउनु हो । समाजमा देखिएका तमाम विकृति र विसंगतिहरुको विरुद्ध सकारात्मक र शालिन ढङ्गले आवाज उठाउनु हो । त्यसका निम्ति हामी सबैसँग हातेमालो गरेर अगाडी बढ्नु हो ।
समूहको विधानमा कस्ता नीति नियमहरु उल्लेख भएका छन् ?
 अहिले हाम्रो संस्थाले दर्ता प्रक्रिया पुरा गरिसकेको छैन् । हामी प्रक्रियामै छौं । कोभिडको कारणले पनि असजिलो बनाएको छ ।
 अन्य ठाउँमा पनि विस्तार गर्ने अवधारणा र समूहले हालसम्म कुन–कुन अभियानहरुमा सम्पन्न भएका छन् ?
 हाललाई त्यस्तो बिचार छैन । भविष्यमा हुन पनि सक्छ । अहिलेसम्म यो संस्थाले स्वास्थ्य केन्द्र सरसफाइ, खानेपानी सरसफाइ तथा मर्मत, रोल्पामा अक्सिजनको आपुर्ति, अति आवश्यक दिब्याङ्ग दलित र जनजातीहरूलाई खाद्यान्न तथा दाल नुन तेल वितरण, असहाय तथा बेवारिसेहरूलाई उद्धार तथा संस्थाहरू मार्फत लालनपालन बसोबासको व्यवस्था, विरुवा वितरण, सरसफाइ र सार्वजनिक शौचलयको मर्मत सम्भार जस्ता कार्यहरू गरेको छ ।
सामाजिक अभियानमा स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल लगायत सरोकारवाला निकायहरुको भूमिका कस्तो रह्यो ?
 हामीले सहयोग र समन्वय गरेसम्म सरोकारवाला सबै निकायहरुको भूमिका सकारात्मक र सहयोग पूर्ण रह्यो । त्यसका निम्ति हामी आभारी छौं र हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहान्छौं ।
 समाजिक अभियानमा हालसम्म कुन–कुन निकायबाट कति रकम संकलन रकम कुन क्षेत्रमा खर्च भएको छ ?
हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट रकम प्राप्त गरेका छैनौं । हामी आफैले र विदेशमा बस्नु हुने रोल्पाली, खासगरिकन हाम्रा परिवारका सदस्यहरू, नातागोता, साथीभाइको सहयोग पाएका छौं । उक्त सहयोग पनि विदेशमा बस्नु हुने रोल्पालीहरुको साझा समूह रोल्पाको लागि रोल्पालीको आव्हानमा हामीलाई प्राप्त भएको हो । उक्त सहयोग रकमको आम्दानी खर्च विवरण गत श्रावण ९ को प्रथम साक्षात्कार कार्यक्रम मार्फत विल भर्पाई सहित सार्वजनिक गरेका छौं । सहयोगी मनहरूलाई फेरी पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं ।
 रकम संकलन गर्दै प्रशासनले समेत सूचना जारी गर्नुलाई समूहको धारणा के छ ?
 स्थानीय प्रशासनको नियम सूचना पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । स्थानीय प्रशासनले मन्त्रालयलाई उधृत गर्दै जथाभावि चन्दा संकलन गरि दुरुपयोग नगर्न भनेको हो क्यार । हामीले जथाभावि चन्दा उठाएका थिएनौैं । हामी आफै र आफ्ना परिवारका सदस्यहरू तथा नातागोताबाट त्यो पनि रोल्पाका लागि रोल्पालीको आव्हानमा हामीलाई प्राप्त भएको हो । हामीलाई चन्दा चाहियो दिनुहोस् भनेर कही कतै उठाउने माग्ने गरेनौं । हामी नियमको पालना गर्ने जिम्मेवार नागरिक पनि हौं ।
 हालसम्म अभियानको सफल्तालाई समूहले कसरी नियालेको छ ?
 अहिलेसम्मको कामप्रति हामी सन्तुष्ट छौं । तर, धेरै गर्न बाँकी छ । हरेक समाजमा समस्या हुन्छन् । तथापि सबै मिलेर समाधान तर्फ लाग्ने हो । हामी सबै एक हँुदै सामाजिक स्वार्थका निम्ति कार्य गर्न आवश्यक छ ।
सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा कस्ता कस्ता समस्याको सामाना गर्नु प¥यो ?
 हामी हाम्रो निस्वार्थ कर्म र लक्ष्यप्रति स्पष्ट थियौं । तसर्थ समस्याभन्दा पनि सहयोग र सद्भाव पायौं । सानातिना समस्या त जहाँ र जहिले पनि हुन्छ र भईरहने छ । यही नै जीवनको रीति हो पनि ।
 आगामी योजनाहरू के–के हुन् ?
हाम्रो योजना सबैसँग मिलेर समाजका निम्ति कार्य गर्दै जाने हो ।
 वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
 देशमा ठूलो परिवर्तन भयो । तर, जनताको जीवन स्तरमा आशातीत परिवर्तन आएको छैन । देश पर निर्भर बनिरहेको छ । राजनीति सेवाको मार्गबाट स्वार्थको पथतर्फ उन्मुख छ । प्रणालीगत सुधार र विकास हुनु पर्नेमा प्रणालीगत विकृति भएका छन् । सबै मिलेर राजनीतिलाई सकारात्मक र श्रृजनशिल दिशातर्फ लैजान आवश्यक छ । जहाँ राष्ट्रियता सुदृढ होस् । जनजिविकाको सुनिश्चितता होस् । हाम्रा वैभवशाली संस्कार संस्कृतिका संरक्षण होस् ।
 राजनीतिकमा फर्किने सम्भावना के छ ?
वर्तमानमा मेरो त्यस्तो कुनै योजना र सोच छैन ।
 अब राजनीतिमा आउनका लागि समूह मार्फत सामाजिक काम गरिखेको भन्ने जिज्ञासाप्रति तपाईको धारणा के छ ?
 पटक्कै होईन । मैले निस्वार्थ मनहरुसँग जोडिएर निस्वार्थ योगदान गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । राजनीति गर्न समाज सेवाको खोल ओढ्न कुनै जरुरी छैन पनि । म त्यो प्रकारको काम गर्दिन ।
 अब फेरि अमेरिका फर्किनु हुन्छ कि यतै समजसेवा गर्नु हुन्छ ?
 मेरो ईच्छा गाउँमै बस्ने छ । काम विशेषले परदेश गएता पनि कर्मथलो घर देशनै हुनेछ ।
समूहबाट अन्य ठाउँका समाज सेवीहरुले सिक्नु पर्ने कुराहरु के–के हुन् ?
 अनेकतामा एकता गर्दै समाजका निम्ति केही गर्न प्रयास गर्नु ।
जिल्ला सरकोरावाल निकायहरुलाई समूहको तर्फबाट के भन्नु चाहानु हुन्छ ?
 जनता जनार्दन हुन् । देश जनार्दनहरुको बासस्थान । सरोकारवालाहरुका निम्ति देश पवित्र मन्दिर हो भने जनता देवता हुन् । जे जति सकिन्छ र सम्भव हुन्छ, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रयास गरौं । के गर्दा जनतालाई सहयोग हुन्छ र देशलाई फाईदा भनेर सोचौ गरौं ।
अन्तिममा कुराहरु छुटेका छन्, कि ?
 देश बने हामी सबै बन्छौं । देश विग्रे सबै विग्रन्छौं । देश परनिर्भर बनिरहे छ । युवाहरू विदेशिदै छन् । गाउँ समाजमा उत्पादन ह्रास उन्मुख हुँदै छ । यही अवस्था धेरै समय चले देशले धान्न सक्दैन । अझै समय छ । सबैले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर आ– आफ्नो ठाउँबाट ईमानदारी पूर्वक सक्दो योगदान गरौं । उत्पादन मूलक, रोजगार मूलक र वातावरण प्रेमी विकासमा जोड दिँदै सकारात्मक, श्रृजनशिल, सद्भाव पूर्ण एवम् समृद्ध समाज र राष्ट्रको निर्माणमा सक्दो योगदान गरौं ।
फुलिवन नमूना वस्तीमा पहिरोले २ घर बगायो, अन्य घर पनि उच्च जोखिम
गंगादेव गाउँकार्यपालितको सम्पन्न, बैठकबाट विभिन्न जनहितमा निर्णयहरु पारित
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७७ असार १, सोमबार १२:४३ गते
गंगादेव गाउँकार्यपालितको सम्पन्न, बैठकबाट विभिन्न जनहितमा निर्णयहरु पारित असार, १ गते लिबाङ–रोल्पा । गंगादेव गाउँकार्यपालिका कार्यालय रोल्पाको आज सम्पन्न बैठकबाट कर्मचारी...
रोल्पाको विभिन्न ठाउँमा मकै बालिमा फौजि किरा र गभारो किराबाट क्षति
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७७ श्रावण २०, मंगलवार ०८:१९ गते
रोल्पाको विभिन्न ठाउँमा मकै बालिमा फौजि किरा र गभारो किराबाट क्षति साउन २० गते लिबाङ–रोल्पा रोल्पाको विभिन्न ठाउँका मकै बालिमा फौजि...